Wikipedia:Lahatsoratra/* - Wikipedia
Ny fizarana "Takelaka tsara vakiana" dia fizarana azo soloin'iza na iza, na hoviana na hoviana ; Ny pejin'ny lahatsoratra hita eo amin'ny pejy fandraisana dia afaka jerena sy ovaina any amin'ny Wikipedia:Takelaka/*/tsara vakiana. Ny takelaka tenenina hoe "tsara vakiana" dia takelaka tsy tokony ahitana diso tsipelina loatra, takelaka manaraka ny fitsipika tipôgrafikan'ny wikipedia, takelaka tsy tokony lava loatra (lahatsoratra tsy mihoatra ny 10.000 teny) ary lahatsoratra betsaka loharano na (source). Ny lahatsoratra eto dia mbola tsy misy manana label « Lahatsoratra Tsara » (« Article de qualité » any amin'ny wikipedia miteny frantsay).
Ny takelaka tsara vakiana (ovay)[hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lahatsoratra/*&oldid=769126"
Voaova farany tamin'ny 12 Jiona 2015 amin'ny 07:52 ity pejy ity.